Antokony ho an’ny olon-dehibe ny tontolo arabo Institute
Rem Al Habsheim, minisitry ny iraisam-pirenena ny fiaraha-Miasa ao amin’ny emira arabo Mitambatra, raha mbola eo ny fitsidihana ny IMA atsy ho atsy ny fiofanana amin’ny taranja ny enim-bolana dia hatao avy unum tamin’ny volana martsa, ny telo juillets.
Fisoratana anarana ao amin’ny sampana mazava ho azy fa ny roa roa amby-roa-enina octobres dia misokatra amin’izao fotoana izao.
Izy ireo dia nikatona ny alakamisy teo amin’ny valo octobres ny rovitra
Ny tontolo arabo Institute manolotra ny antokony ao amin’ny mpahay teny arabo sy dialectal teny arabo: alzeriana, ejipsiana, ny maraokana, siriana sy ny libaney Ny teny arabo ara-bakiteny dia namelatra amin’ny telo ambaratonga samihafa miainga avy amin’ny Fahazavana ho Bun ny CEFR ary dia nanatitra: taranja Rehetra dia mifanaraka CEFR toy izao manaraka izao. Amin’ny fipihana eo amin’ny tsirairay mazava ho azy, dia ho nentina tany amin’ny fandaharana. Raha toa ianao ka tsy nandray mazava ho azy fa amin’ny IMA, dia tsy maintsy, mialoha ny misoratra anarana, jereo ny ambaratonga amin’ny alalan’ny fanaovana ny fametrahana fitsapana ara-bakiteny ny teny arabo, ny fiteny ofisialy fahita any amin’ireo firenena arabo rehetra: izany no ampiasaina mihoatra ny efa-jato tapitrisa ny olona manerana izao tontolo izao. Izany no fitenin ny nanoratra (ny asa fanaovan-gazety, ny literatiora.), fa izany koa no ampiasaina am-bava, ao ny haino aman-jery, amin’ny toe-javatra ny ofisialy ny fantsona ny fifandraisana, fomba maharitra, ary any misy resaka fa maka toerana eo amin’ireo mpiteny ny teny arabo aza tsy miteny toy izany koa ny tenim-paritra. Dialectal arabo dia fiteny fifandraisana fahita any amin’ny hafa firenena arabo. Misy telo lehibe ny fianakaviana fitenim-paritra: Maghreb, ny afovoany Atsinanana sy ny Golfa. Ny tontolo arabo Institute manolotra ny antokony ao amin’ny mpahay teny arabo, ary ny arabo tenim-paritra: alzeriana, ejipsiana, ny maraokana, siriana sy ny libaney, ka afaka misafidy ny teny izay mifanaraka tsara indrindra ny faniriana na ny fianarana ny tanjona. Safidy ny: mpahay teny arabo, dialectal teny arabo, ilay ejiptiana, afrika avaratra na ny siriana sy ny libaney. Fanokafana ora: andro sy ny hariva mandritra ny herinandro ary koa ny asabotsy maraina. Ho an’ny antsipirihany bebe kokoa, dia jereo ny fandrindrana ny fisokafan’ny fisoratana anarana. Vola lany amin’ny telo ora fiofanana: manavaka ny VAT ho an’ny olona efatra dimy HT dimy efatra TTC ho an’ny raharaham-barotra be antokony dia nokarakaraina nandritra ny sekoly fety tao Paris.
Ny fandaharam-potoana fanao isan-taona dia navoaka tamin’ny volana janoary ity
Ny tsirairay mazava ho azy fa natao ny kely vondrona dimy ny olona roa, ao amin’ny faritry ny ivon-toerana ny tontolo arabo.
Isaky ny atrikasa dia nataon’ny mpampianatra roa
Ity fomba tsy manam-paharoa, malaza noho ny mpianatra, miantoka tandrify ny fianarana: ny fihetsiketsiky, isan-karazany ny lantom-peony, fomba ny manao, ny maha-izy azy Araka ny safidinao, ny mpandray anjara dia afaka manana sakafo atoandro any amin’ny iray amin’ireo fisakafoana faritra IMA na eo amin’ny manodidina, izay manome ahafahana manao zavatra maro ho an’ny rehetra tiany sy izay rehetra teti-bola. Vola lany amin’ny telo ora fiofanana: manavaka ny VAT ho an’ny olon-tsotra, efatra, dimy HT, na dimy efatra manavaka ny VAT ho an’ny raharaham-barotra. Tahaka ho an’ny rehetra ny olon-dehibe ny antokony, ny trainee karatra ahafahanao mandray soa avy amin’ny tombotsoa maro ny IMA. Ny foibe ny fiteny sy ny fandrosoana arabo dia hanovozan-kevitra, Angon-drakitra dock, sy ny fiofanana omena dia afaka ho raisina an-tànana ny CPF. Fa ny fankatoavana ny fiofanana, ianao manaiky misoratra anarana na ny fanombanana amin’ny teny arabo voasoratra ao amin’ny RNCP (National Register ny Matihanina Certifications): Evlang (amin’ny ambaratonga rehetra) na DCL (ho an’ny sehatra-kafa roa amin’ny kely indrindra)
← Izay Hihaona any an-Toerana ny Ankizivavy - Dubai Sehatra fiadian-kevitra
Ahoana no hihaona sy hanambady Arabo zazavavy - Online Dating →